How'd it happen and more reports?: နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌဌာန်းချက်များ (Foreign Exchange Management Regulation)
နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌဌာန်းချက်များ (Foreign Exchange Management Regulation)
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌဌာန်းခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းကဏ္ဍဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်မှုရရှိရန်နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု စည်းမျဉ်းကို ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Foreign Exchange Management Law Final 21-8-20120by Than Han on Scribd
Posted by Ko Nge at Thursday, February 16, 2017
Labels: စီးပွားရေး, ဥပဒေ, ငွေကြေး
၀င်ငွေခွန်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ပုံစံ...
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖ...
တစ်နှစ်ဝင်ငွေ သိန်း၂၀ အထက်ရှိသူ ၀င်ငွေခွန် ဆောင်ရမ...
ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း Yangon Stock Exchange (YSX)...
Forex ဈေးကွက် ဆိုတာဘာလဲ?
ကာလလတ်ကြွေးမှီစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာ Medium - Term...
၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရသုံးခန့်မှန်းခြေ (Citizen's Bu...
Open Myanmar Initiative's Budget Explorer!
၁၉၈၂ မြန်မာနိူင်ငံသား ဥပဒေ (The 1982 Burmese Natio...
မြန်မာ ပြည်မှာ ငွေကျပ် ၁ သောင်းတန် အတုတွေ တော်တော...
နိုင်ငံခြားသုံးငွေစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက် အက်ဥပဒေ( Fo...
နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌဌာန်းချက...
Money Laundering act: ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက...
မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ စီမံကိန်းကြီးများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ရင်းနှီြး...